Maxay yihiin siyaabaha waxtarka leh ee loogu talagalay farsamooyinka dalbashada guusha iyo kordhinta iibka alaabada
Haddii aad raadineysid inaad gashid suuqa cusub ama aad balaadhiso ganacsigaada, Amazon oo aduunka ujoogaayo waa fursada ugu fiican ee adiga iyo ujeedooyinka ganacsigaaga. Haddii aad ku wareersan tahay meheradda aad jeceshahay inaad bilowdo ganacsigaaga ama aadan haysan miisaaniyad kugu filan si aad u abuurto goobtaada ecommerce, Amazon.com waa hubaal waxaad u baahan tahay. Amazon waa mashruuca e-ganacsiga oo kaliya ee adduunka ah kaas oo bixiya hodannimo sir-doon ah oo feker ah. Qeybta ugu fiican waxaa ka mid ah in aad heli karto qiimaha hoose ama xitaa bilaash.
In this article, waxaan ka wada hadli doonaa sida si habboon u maamulaan faa'iidooyinka Amazon iyo baro sida dhabta ah suuqa aad rabto. Waxaad ka heli doontaa talooyinka faa'iido leh sida loo aqoonsado suuqyadaada ugu sareysa suuqa aadna uga soo baxdo. Waxaan rajeyneynaa taladayada inay kugu caawiso inaad ku guuleysatid Amazon oo aad ka dhigto ganacsigaada barwaaqo. Sidaas daraaddeed aan u galno!
Amazon wax soo iibinta alaabta
Aqoonsiga suuq-geynta ugu wanaagsan
habka loo ogaado suuqa xorta ah ee aad jeceshahay inaad horumariso ganacsigaaga waa inaad ku hubiso liiska iibiyeyaasha Amazon ugu fiican. Haddii aad horey u dooratay niche, waxaad isticmaali kartaa macluumaadka ugu iibinta ugu fiican si loo go'aamiyo waxyaabaha ay u badan tahay in ay u rafcaan suuqa aad diirada saartid iyo dhalinaysaa tirada badan ee iibka on Amazon. Sheegashada sheyga, waxaad ka hubin kartaa meesha ay ku jirto iibka iyo sida ay isticmaalayaashu u qiimeeyaan. Si aad u hesho kala duwanaansho badan, waxaad fiirin kartaa qaybaha hoose ee dhinaca bidix ee bogga. Qaybaha hoose waxay ku siin karaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan suuqyada la soo xulay oo tixgelinaaya in aad hoos u dhigto suuqa bartilmaameedkaaga. Waxay noqon kartaa in aysan jirin qayb hoose oo loogu talagalay niche, laakiin waxaa suurtagal ah in ay jiraan..Haddii aanad, fiiro gaar ah u laheyn qaybaha hoose ee la xiriira sababta oo ah waxay sidoo kale ku siin karaan fikrad ganacsi oo wanaagsan.
Aqoonsiga TOP-gaaga tartanka suuqa kala iibsiga
adoo eegaya kuwa ugu fiican, waxaad sidoo kale aqoonsan kartaa tartamayaashaada hoose. Waxaad ka heli kartaa badeecooyinkaan Google-ka iyo waxaad ka eegtaan waxyaabaha ay soo saaraan. Intaa waxaa dheer, waxaad qarsoodi kartaa dukaanka oo iibsan kartaa badeecadahooda si loo eego tayada adeegyadooda taageerada macaamiisha iyo wakhtiga dhalmada. Intaa waxaa dheer, hubi waxa aad tartamayaasha ugu sarreeya ay ka qabanayaan Amazon oo ku saabsan jimicsiga kor u kaca iyo hoos u dhaca. Xulo alaabada ku habboon ee aad ku iibinayso suuqaaga
Amazon ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad go'aansato waxa alaabta ay tahay inaad iibiso. Macluumaadkan waxaad ka heli kartaa bogga alaabada ee ugu caamsan. Waxaad ka heli kartaa alaabada la xidhiidha qiimaha tayada sare iyo qiimaha hooseeya. Markaad sidaa sameysid, waxaad ka soo bixi doontaa tartamayaashaada waxaadna kor u qaadi doontaa iibkaaga alaabta Amazon.
Cilmi-baarista Amazon, waxaad ka ogaan kartaa waxa kor u kaca ah ee aad u isticmaasho hanti-siinta suuq-geynta. Waxaad gabi ahaanba ku tiirsanaan kartaa mashiinkan maadaama uu sameeyo baaritaanno iyo baaritaano badan kahor intaanad siinin adeegsiyo natiijooyin kasta. Marka, fiiri bogga ugu fiican ee alaabta aad u baahan tahay iyo guji liiska ugu fiican ee laga iibsaday liiska. Fiiri sawirka wax soo saarka ee sadexda qeybood ee soo socda, waxaadna fiirin doontaa "si joogta ah loola wada iibsado", "macaamiisha kuwaas oo iibsaday sheygan sidoo kale ayaa soo iibsaday" qaybta iyo "alaabta la kafaalo qaaday ee la xiriira qaybtan". Hubinta qaybahan, waxaad heli doontaa macluumaadka sirta ah ee tartanka Source .